Ebumnuche siri ike nke StrongStep® Adenovirus Ngwa Ngwa Ngwa Ngwa (Feces) bụ ngwa ngwa ọhụụ na-aga n'ihu maka nchọpụta ike nke adenovirus na ụdị mmadụ nke ụdị mmadụ. Ezubere kit a maka enyemaka maka nchoputa ọrịa adenovirus. Okwu mmalite adenoviruses, nke bụ isi Ad40 na Ad41, bụ ihe kpatara ọrịa afọ ọsịsa na ọtụtụ ụmụaka na-arịa nnukwu ọrịa afọ ọsịsa, nke abụọ bụ naanị rotaviruses. Ọrịa afọ ọsịsa bụ isi sekpụ ntị na-egbu m ...
Ebumnuche ejiri StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) bụ ngwa ngwa ọhụụ na-aga n'ihu maka ikike, nchọpụta na-eche echiche nke Giardia lamblia na ụdị mmadụ. Ezubere kit a maka enyemaka iji chọpụta ọrịa ọrịa Giardia lamblia. Okwu Mmalite Giardia lamblia bu ihe ndi mmadu a maara nke oma na obu otu n’ime isi ihe na-akpata oke oria ojoo na mmadu, ...
Nzọụkwụ® H. pylori Antigen Rapid Test bụ ngwa ngwa na-egbochi immunoassay maka qualitative, nchọpụta na-eche echiche nke Helicobacter pylori antigen nwere ntụpọ mmadụ dị ka ihe atụ.
Okwu Mmalite Rotavirus bụ onye na-ahụkarị maka ọrịa gastroenteritis, ọkachasị ụmụaka. Nchọpụta ya na 1973 na mkpakọrịta ya na infantile gastro-enteritis na-anọchite anya ọganihu dị oke mkpa n'ịmụ banyere ọrịa gastroenteritis nke ọrịa nje na-ebute. A na-ebute Rotavirus site n'okporo ụzọ ọnụ na-aga n'ihu na oge ntinye nke ụbọchị 1-3. Ọ bụ ezie na ụdị anakọtara n'ime ụbọchị nke abụọ na nke ise nke ọrịa ahụ dị mma maka antigen detectio ...
Uru uru ezi uche (89.8%), kpọmkwem (96.3%) gosipụtara site na nyocha nke 1047 na 93.6% nkwekọrịta ma e jiri ya tụnyere usoro ọdịbendị. Ọ dị mfe ịme usoro otu usoro, enweghị ọkachamara pụrụ iche achọrọ. Ngwa Naanị 10 nkeji chọrọ. Nkọwa nchekwa nchekwa ụlọ Nkọwapụta 89.8% Specificity 96.3% ziri ezi 93.6% CE akara Kit Size = 20 test File: Manual / MSDS INTRODUCTION Salmonella bụ nje na-akpata otu ọrịa na-ebute ọrịa (eriri afọ) na worl ...
Okwu Mgbawa Ọrịa ọgbụgbọ, nke V.cholerae serotype O1 kpatara, na-aga n'ihu na-abụ ọrịa na-emebi ihe nke metụtara mba niile n'ọtụtụ mba na-emepe emepe. N'ihe gbasara ahụike, ọgbụgbọ na ọnyụnyụ nwere ike ịmalite site na ịchịkwa asymptomatic ruo nnukwu afọ ọsịsa na oke mmiri mmiri, na-eduga na akpịrị ịkpọ nkụ, nsogbu electrolyte, na ọnwụ. V. cholerae O1 na-ebute afọ ọsịsa nzuzo a site na ịchịkwa eriri afọ nke obere na imepụta nsị nke ọgbụgbọ na ọnyụnyụ, n'ihi usoro ọgwụgwọ na ntiwapụ ...
Vibrio cholerae O1-O139 Ule
Okwu Mgbawa Ọrịa ọgbụgbọ, nke V.cholerae serotype O1 na O139 kpatara, na-aga n'ihu na-abụ ọrịa na-emebi ihe nke metụtara mba niile n'ọtụtụ mba. N'ihe gbasara ahụike, ọgbụgbọ na ọnyụnyụ nwere ike ịmalite site na ịchịkwa asymptomatic ruo nnukwu afọ ọsịsa na oke mmiri mmiri, na-eduga na akpịrị ịkpọ nkụ, nsogbu electrolyte, na ọnwụ. V.cholerae O1 / O139 na-ebute afọ ọsịsa nzuzo a site na ịchịkwa eriri afọ nke obere na mmepụta nke tolera siri ike nke ọgbụgbọ na ọgbụgbọ, N'ihi ụlọ ọgwụ na ...
H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket, Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale,